Vahoaka… antom-pisiana fitondrana
Nifantoka betsaka amin’ny sosialim-bahoaka ny fangatahan’ny ankamaroan’ny depiote tamin’ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena tamin’ny governemanta: olana amin’ny famatsian-drano, tsy fandriampahalemana, fanamboaran-dalana…
Nambaran’ny Praiminisitra fa tsy mihevitra hiverina amin’ny hamehana ara-pahasalamana aloha ny fitondram-panjakana amin’izao, na mbola ao anatin’ny krizy ara-pahasalamana aza i Madagasikara. Efa voadinika tsara ny fanokafana ny sisintany.
Nanao fianianana handray asa ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), nilaza fa tsy tratra aoriana ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana tokony ho nanomboka ny 1 desambra.
Nilaza ny minisitry ny Fitsarana fa ny fanaovana tatitra diso amin’ny fanatrarana ny tanjona: 70% no voatsara manefa sazy amin’ny voafonja, 30% no miandry fitsarana. Hisy ny tombana hatao amin’ireo tomponandraikitra isan’ambaratonga.
Depiote roa teo aloha no nampanantsoin’ny vaomiera momba ny Fitsarana avo (HCJ) eny anivon’ny Anteni­mie­rampirenena hanaovana fanadihadiana momba ny raharaha fanodinkodinam-bola, saingy tsy tonga fa nandefa solontena.
Naverin’ny Jirama tamin’ny Banky iraisam-pirenena ny vola 6 901 704 827,40 Ar, araka ny fanadihadian’ity farany tamin’ny fampiasana famatsiana ny tetika fanatsarana ny fitantanana sy ny asa amin’ny sehatry ny herinaratra (Pegose), taona 2018-19.
Mbola be ny mila alamina sy hatsaraina etsy sy eroa. Mitondra inona mivantana na ankolaka eo amin’ny fiainan’ny vahoaka ifotony izany rehetra izany? Ny vahoaka no hoe antom-pisian’ny fitondrana: ny fanjakana no mitondra dia ny vahoaka.